Qaama Saala Kaansariin Hubame Qaama Saalaa Nama Du'en Bakka Buufamuun Milkiin Xumurame
Qaama Saala Kaansariin hubame Qaama saala nama du’en Bakka busuun yeroo jalqabaaf milkiin xumuurame
Obbo. Toomas Maaning qaamaa saalaa Kaansarii dhaan kan qabamee ture qaama saalaa haaraa argatee!
Qaamni saalaa sababa dhukkuba kaansariin kan irraa murame Obbo. Toomas Maaning, qaama saalaa haaraa mana yaala waliigalaa Masachuuset, biyyaa Ameerikatti argachuu danda’eera.
Toomas ummrii dhaan waggaa 64 yeemmuu ta’u, magaala Haalifaksitti hojjettuu bankii dha. Guyyaa Caamasa 8 hanga 9 baqaqsaa saa’ati 15 booda qaamni saalaa nama du’erraa muranii isattii akka kennan Doktorrii baqaqsaa kana hojjate beeksiseera.
Guyyaa Jimaata darbe erga baqaqsi milkii dhaan xumurame booda Obbo. Toomas “Akka durii sanatti deebi’u barbaada” jechuu dhaan gammachuu itti dhagahameen fi akka baqaqsii miidha tokko isarraa hin geenye ibsate.
Dr. Kaartis L Seentrulo
Dr. Kaartis L. Seetruulo, akka jedhaniitti “baqaqsa qaama saalaa kana tasumaa hin milkaa’a jennee hin yaadne ture. Akka carraaqi jalqabaatti kan raawwanne milkoofne dha.” Dr. Kaartis ogummaa dhaan nama sirreessa qaama namaati (Plastic Surgeon). Warrootni akka tasaa qaamasaani miidhaman irratti nama baqaqsaa dhan sirreessee uumaa duriitti nama deebisuu yaalu dha. Akka fakkeenyatti namnii dhukkuba kaansariin qabamana, akkasumas warroota dirree waraanatti miidhaman, kannen harka fi miila irra muraman gargaara jechuu dha. Hojii waa’e sirreessa qaama saalaa kunii akka argama laga haaraa nutti ta’eera jedhan Dr. Kaartis. Ta’us garuu hojii akkana nuuf milkaa’u akkasumas Obbo. Toomasiif gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa.
Yoo hundii akka yaadameetti ta’e torbaan tokko keessatti Obbo. Toomas akka duriitti ofisaani akka fincaa’u fi ji’a tokko keessatti akka wal qunnamtii saalaa gochuu danda’an Dr. Kaartis dubbatanii jiru.
Namoota akka Obbo. Toomasiitti dhukkuba qaama saalaa waliin wal qabate baayyinaan dargaggoota waraana Ameerika keessa turaniis qorannoon Yunibersitii Doktoroota, Joon Hopkiins ibsaniiru. Warroonni qaama saalaa akka Obbo. Toomasittii yaalamu barbaadan maqaasaani galmeessani hiriira akka eegachaa jiraniis nidubbatama.
Yaalii baqaqsii Obbo. Toomas gatii doolaara $50,000 hanga $75,000tuu irratti kafalame. Kan kana hunda bakka bu’e kafale immo Hospitaala Masachuuset ta’usaas barameera. Doktoroonni hojii kanarratti hirmaatan ammo kafaltii tokko malee kan hojjatani dha. Kuniis yaalii jalqabaa waan ta’efi doktoroonni hunduu kafaltii malee hojjechuuf murteessan. Gidduu kanattii utuu Obbo. Toomas lubbuun dhaan dabree ta’e doktoroonni baqaqsii qaama saalaa kana hojjatan itti gaafatamummaa hin fudhatan ture.
Biyyaa Ameerika keessattii dhiironnii hanga 1,367 kanneen waraana keessa turan dhukkuboota qaama saalaa qabaachunsaani Eegumsa Fayyaa fi Itisa biyyaa beeksisanii jiru. Dhiironni kunneen sababaa boombii garagaraa fi dhukaasa garagaraa qaama saaniirra gahameen qaamni saalaa isaani godaannisa yaalamu hin dandeenyetu irraan dhaqabe.
Namoonni akka Obbo. Toomas Maaning kanneen qaamni saalaa dhukkuba kaansariin qabame mana yaala deemuu sodaachuutu dhagahama. Dhiironni qaama saalaa isaani mana yaalaatti ilaalchisuu sodaachuu fi saalfachuu waan baayyisaniif namootni dhukkuba kanaan du’an kumaataman lakkaawama. “Warrootni dhukkuba qaama saalaa qabu immo akka kooti carraa akkana fayyadamanii mana yaala deemun barbaachisaa dha keessattuu dargaggootaaf” dhaamsa jedhuun dabarsee ture Obbo. Toomas Maaning.
Mallattoo dhukkuba kaansarii qaama saalaa haala kamiin beeku danda’ama? Dhukkubbii kun mallattoo hedduu ofkeessatti haammata. Mallattoon inni kanneen asii gadii tarreefame keessa namni yoo qabaate dhukkuba kaansarii qaama saala qabda jechuu mitii. Dursa mana yaala deemani sirritti maraammaramuutu barbaachisa.
1. Dhiirroonni hin kittaanamne
2. Dhukkuba AIDS (HIV)
3. Dhiiga fincaa’u
4. Hooksisaa qaama Saalaa
5. Fooli badaa
6. Qaamni Saalaa dhiiga cobsuu
7. Qaamni saalaa jabaachuu fi yeroo dheeraf dhukkubuu
Mallattoo asii olii tarreefame tokko-lama qabaachu jechuun dhukkuba kaansarii qaama saalaa qabda jechuus hin ulfaata. Dursa wantoota qaama saalaa keessan irra shakkitan yoo jiraatte hatattamaa gorsa doktora keessan fudhachuu barbaachisaa dha. Yeroo dhan mana yaala deemun dhukkuba hamaa irra ofirra ittisuu dandeenya.
Maddii Odeefannoo: New York Times